Inofungidzirwa kutengeswa kweanosvika mamirioni 2,8 Apple Watch panguva yeQ2 | Ndinobva mac
Inofungidzirwa kutengeswa kweanosvika mamirioni 2,8 Apple Watch panguva yeQ2
Uye ndizvozvo kubva pakutanga izvo Hatina iyo yepamutemo yekutengesa data yeApple Watch inowanikwa uye vaongorori, pamwe nemakambani akasarudzika, vanoita basa rekutsvaga kuti vawane huwandu hwekutengesa kwechigadzirwa ichi kubva kuvakomana vanobva kuCupertino.
Mune imwe yemisangano yepamutemo iyo mhedzisiro yezvemari yekambani inoratidzwa, Apple yakapa yepamutemo yekutengesa nhamba yeiyo wachi, saka vaongorori vakaita seChirongwa Chekuongorora vanofanirwa kutiratidza huwandu hunofungidzirwa maererano nezvakatumirwa, mune ino kesi vangangoita mamirioni 2,8 Apple Watch mukota yechipiri.
Iyo nhamba ndeyekufungidzira kune iyo chaiyo nhamba, asi ichi chaicho chimiro hachizivikanwe zvachose saka unofanirwa kuvimba nezvakatumirwa uye kutengesa zvakanyorwa nevanoongorora. Zvinotaridza kuti Apple wachi inodarika iwo akafanana manhamba mukutumirwa uye kutengesa Strategy Analytics munguva yakapfuura 2016:
Chimwe chokwadi chinoshamisira icho chinowanikwa kubva kuongororo iyi yekutengesa uye zvigadzirwa zvakatumirwa ndezvekuti Apple inoramba ichikura mukutengesa kana ichienzaniswa nevakwikwidzi vayo, kunyangwe chiri chokwadi kuti Fitbit naXiaomi vanomira sevakwikwidzi vakakura muchikamu ichi, havana kufananidzwa nemutengo uye nenhamba yevashandisi pasi rese. Ichokwadi kuti zvese zvinoita kunge zviri pamusoro maererano nenhamba asi Apple ndiyo yega inokura zvese mukutumira nekutengesa uchienzaniswa nenguva imwecheteyo ye2016.
Chokwadi ndechekuti kusvika kweApple Watch Series 1 uye 2 kunoita kuti vashandisi vaida "kuramba mvura" uye nekuvandudza mukumhanya kwewachi kuenda kune idzi shanduro nyowani. nguva yeKisimusi inewo mhosva Mune aya manhamba uye kana isu tikawedzerawo zvinopihwa zvemhando yekutanga chizvarwa, zviri pachena kuti iwo manhamba akanaka. Zvino nerunyerekupe rwechangobva kuitika rwemuenzaniso mutsva gore risati rapera, zvinogona kudzora kutengesa zvishoma, asi isu tichaona izvi mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Inofungidzirwa kutengeswa kweanosvika mamirioni 2,8 Apple Watch panguva yeQ2
Maitiro ekushandura maPepa ePDF mafaira kuva Mifananidzo Mafaira